5-ta Ugu Haboon ee Lagu Kordhiyo Nidaamka Lacag Bixinta ee Mobilka | Martech Zone
5-ta ugu sareysa ee kor loogu qaado habka lacag-bixinta ee mobilka
Khamiista, Oktoobar 26, 2017 Eran Feinstein
Taleefannada casriga ah iyo kiniiniyada ayaa si isa soo taraysa u ah aalado caan ah oo dadku maalin kasta isticmaalaan. Markay tahay ecommerce, lacag bixinta mobiladu waxay noqoneysaa ikhtiyaar caan ah, iyada oo ay ugu wacan tahay fudeydka iyo sahlanaanta sameynta lacag bixinta meel kasta, waqti kasta, qasabado yar. Ganacsade ahaan, kor u qaadida habka lacag bixinta ee moobiilku waa maalgashi qiimo leh oo u horseedi doona kordhinta qanacsanaanta macaamilka, iyo ugu dambeyn - iibin badan.
Nidaamka lacag-bixinta ee liita ayaa kaa horjoogsan doonta inaad gaarto yoolalka macaamil-gacmeedka mobilada ee warshadahaaga waxayna keeni kartaa tiro badan oo lacag-celin ah. Haddii aad dareentay astaamahan, waxay si gaar ah adiga kugu habboon tahay inaad horumariso. Waxaa jira dhowr tallaabo oo aad qaadi kartid si aad ugu hagaajiso habka lacag-bixinta moobilka. Waa kuwan shanta ugu sarreysa:
1. Abuur degel-saaxiibtinimo-saaxiibtinimo leh
Tani waa tan ugu muhiimsan ee abuurka habka lacag-bixinta moobiilka oo siman. Websaydhkaagu waa inuu noqdaa mid jawaab celin ah - iskiis u qaabeynaya isticmaalka moobiilka si dadka isticmaala aysan u baahnayn inay ku soo dhawaadaan ama ay ku riixaan badhannada yaryar. Websaydhada aan ku fiicnayn qalabka moobiilku waa kuwo jahwareersan waxayna ka hor istaagi karaan macaamiisha inay dhammaystiraan geedi socodka lacag bixinta gebi ahaanba. Sida laga soo xigtay Adobe, ku dhowaad 8 ka mid ah 10kii macmiil ayaa joojin lahaa ku lug lahaanshaha waxyaabaha haddii aysan si fiican ugu soo bandhigin qalabkooda.
Nadiif, naqshad yar, oo leh badhano waawayn iyo qoraal si fudud loo akhriyi karo, ayaa macmiil u sahlaya inuu si dhakhso leh ugu sii socdo nidaamka wax iibsiga iyo wax kala iibsiga. Qaar ka mid ah PSP-yada ayaa bixin kara bogag lacag bixin ah oo la martigeliyay kuwaas oo loogu talagalay gaar ahaan dadka isticmaala mobilada.
Marka lagu daro degel websaydh ah oo saaxiibtinimo leh, waxaad kaloo abuuri kartaa barnaamij mobiil ah. Isticmaalayaashu waxay ku soo dejisan karaan barnaamijka aaladda moobilkooda oo ay ku furan karaan hal tuubbo, iyagoo astaantaada ku haaya faraha, 24/7.
2. Bixi Hababka Lacag-bixinta Mobilada
Waxay umuuqataa inay tibaaxayaan waxa iska cad, laakiin bixinta hababka lacag bixinta mobilada waa hab fiican oo lagu soo jiito macaamiisha aaladaha mobilada. PSP-ga aad la shaqeysid waa inuu awood u yeeshaa inuu mideeyo hababka lacag bixinta mobilada, sida boorsooyinka mobilada iyo lacagta mobilada, taas oo u oggolaaneysa isticmaaleyaasha inay wax ku bixiyaan taleefannadooda. Hababka kale ee lacag bixinta, sida isticmaalka kaarka deynta, waxay ku lug leedahay gelitaanka macluumaadka gacanta, taas oo ku adag shaashad yar oo waqti badan qaadata. Taa bedelkeeda, lacag moobayl ah ayaa lagu samayn karaa dhawr jeer oo suuf ah iyo qasabado. Sida ugu dhakhsaha badan ee nidaamka lacag bixinta, ayay u badan tahay inuu macaamilku dhammaystiro, taasoo si weyn hoos ugu dhigaysa ka tagista gaadhiga dukaamaysiga
3. U oggolow Omni-Channel Dukaameysi
Teknoolojiyadda ayaa meel walba taal - waxaad lahaan kartaa macaamiil fara badan oo bilaaba inay ka baaraan degitaanka websaydhka gurigaaga oo doonaya inay dhammaystiraan iibsigooda markay socdaan, iyagoo wata aaladda moobilkooda. Haddii dariiqooyinkaaga lacag bixinta ay iswaafajinayaan midba midka kale, tani waxay noqoneysaa arrin aan muran lahayn. Cilmi baaris Kooxda Aberdeen waxay ogaadeen in shirkadaha leh xeeladaha ka-qaybgalka macaamiisha ee omni-channel ay leeyihiin 89% heerka haynta, marka loo eego kaliya 33% la'aan. Boggaaga moobiilka ama abkaagu waa inuu u ekaadaa goobta desktop-kaaga muuqaal ahaan. Sidoo kale waa inay bixisaa isla qaababka lacag bixinta - kala hadal PSP-gaaga si aad u hubiso inay tani macquul tahay.
4. Hubso inaad haysato amaan u gooni ah qalabka mobilada
Kahortaga khayaanada ayaa muhiim u ah dhamaan qeybaha kala duwan ee ganacsiga, laakiin qatarta dhanka amaanka ah wey ku kala duwan yihiin kanaalada. Markaad dooranaysid PSP, hubi inay ku deeqi karaan amni u heellan lacagaha mobilada, maaddaama khiyaamada isticmaalka taleefanka gacanta ay inta badan ka duwan tahay khayaanada lagu sameeyo internetka. Fududeynta habka lacag bixinta mobilada iyo macluumaadka ugu yar ee uu soo geliyo adeegsadaha ayaa kordhin kara halista khiyaamada, sameynta amniga ugu muhiimsan. Farsamooyinka amniga mobilada waxaa ka mid ah la socoshada aaladaha iyo iswaafajinta meesha ay ku yaalliin cinwaanada biilasha iyo rarka, iyo sidoo kale falanqaynta aaladaha waqti ka dib, si loo ogaado macaamil ganacsi kasta ama dhaqdhaqaaq.
5. La shaqee PSP oo bixiya xal isku dhafan
Waxaan ka hadalnay sida looga dhigi karo khibrada macmiilka mid ka wanaagsan, laakiin ka waran adiga? Ganacsade ahaan, waxaad ubaahantahay nidaamka lacag bixinta mobilada inuu sahlanaado maarayntiisa. Wanaagsan adeeg bixiyaha (PSP) waxay ku siin doontaa xal isku dhafan labada mobiil iyo desktop, oo leh habab badan oo lacag bixin ah. Waa inay soo bandhigaan qalab kuu fududeynaya inaad dhex gasho hababka lacag-bixinta moobaylka. Qalabkan waxaa ku jiri kara xirmooyinka horumarinta softiweerka iyo API-yada lacag-bixinta moobiilka.
Nidaamka ugu wanaagsan ee lacag-bixinta moobiilku wuxuu ka dhigan yahay qaabeynta khibradda moobiilka si loogu habeeyo baahiyaha adeegsadaha mobilada. Abuur degel mobiil heegan u ah oo ka tarjumaya boggaaga desktop, kuna hubso hababka ku habboon ee amniga iyo lacag bixinta, macaamiisha mobilada ee faraxsan, iyo beddelaadda oo kordhay.
Tags: ganacsiga gacantamobile-ka saaxiibtinimolacag bixinta mobiladaammaanka mobileomni-ka adeegashadapsp
Infusionsoft Hada Waxay Kujirtaa Jawaabcelin, Summad La'aan, Jiid iyo Soo Degitaan Bogag
Agaasimayaasha softiweerka tooska ah ma saaxiib saaxiib ama tartan baa?